अध्यादेश फिर्ता भएपछि झाँक्रीको प्रश्न : के योसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
अध्यादेश फिर्ता भएपछि झाँक्रीको प्रश्न : के योसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ ?
काठमाडौं, १२ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले अध्यादेश फिर्ता भएरमात्रै यो सँगै सबै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न नसकिएको भन्दै गम्भिर प्रश्न उठाएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत झाँक्रीले यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले अध्यादेश फिर्ता लिनेबित्तिकै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न नसकिएको भन्दै गम्भिर प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले यस्तो लेखेकी छिन्, “अध्यादेश फिर्ता भयो रे! के योसंगै सम्पूर्ण राजनितीक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ सकिदैन। अब के हुन्छ?”
सरकारले आज यसअघि जारी गरिएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
. यूएन ह्याबिटेटको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री झाँक्री अमेरिका प्रस्थान
. काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरिन्छ : मन्त्री झाँक्री
. एकीकृत बस्तीको योजना प्रभावकारी देखिएनः मन्त्री झाँक्री
. राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष मन्त्री झाँक्रीको आग्रह : एकीकृत शहरी विकासको लागि बजेट थप्नुपर्‍यो
. ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री
शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
यता, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले भने अध्यादेश फिर्तापछि पात्र होईन शास्त्र फेरौं भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा यो अध्याय सकिन्न। यसले पृष्ठभूमिमा छोडेर गएको राजनीतिक पदचाप जहिलेसम्म पुनरावृत्ति हुन्छ- पात्र मात्र बदलिन्छ। उही प्रवृत्ति, नैतिकता र राजनीति बोकेको अर्को पात्रले गर्ने पनि अर्को नयाँ वितण्डा मात्र हो। अब राजनीतिको ‘पात्र’ होइन, ‘शास्त्र’ फेरौं।”